Oulu Finland: Gịnị kpatara o ji amasịkarị ndị njem?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Tourism » Oulu Finland: Gịnị kpatara o ji amasịkarị ndị njem?
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Oulu bụ ọkacha mmasị na njem na njem nlegharị anya na Finland. Kemgbe afọ ndị 1990, mgbe elektrọnik gafere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọdịnala ọdịnala na Finland, mba ahụ abụrụla onye ndu ụwa niile na teknụzụ, na-adọta ndị nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ na-enweghị isi.
Oulu bụ ọkacha mmasị na njem na njem nlegharị anya na Finland. Kemgbe afọ ndị 1990, mgbe elektrọnik gafere ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọdịnala ọdịnala na Finland, mba ahụ abụrụla onye ndu ụwa niile na teknụzụ, na-adọta ndị nwere ọgụgụ isi na-arụ ọrụ na-enweghị isi. Karịsịa, obodo Finnish bụ Oulu ahụwo ezigbo ihe ịga nke ọma ma ugbu a bụ obodo na-eto ngwa ngwa na Arctic Europe.
Oulu bụ ebe azụmahịa, logistic na ọdịbendị ọdịbendị na Northern Europe, na-eme dị ka ọnụ ụzọ ámá nke mpaghara ndị ọzọ, ma kpebisie ike ịmalite mmepe siri ike n'ime afọ 10 sochirinụ.
Ululọ Mgbakọ Oulu kwadebere nke ọma ịkwado uto a. Lọ ọrụ ahụ na-eweta enyemaka pụrụ iche na ụlọ ọrụ na mkpakọrịta mba ụwa na-achọ ebe zuru oke iji kwado mmemme azụmahịa. Ọ na-enye ndụmọdụ na enweghị ịkpa ókè na ịchọ, ịhazi, ịre ahịa na ịme ihe.
Oulu nwere oge anọ dị iche iche, nke ọ bụla na-etu ọnụ pụrụ iche, site na etiti abalị nke anwụ ruo ụbọchị ụbọchị oyi na abalị ehihie na-acha ọkụ site na ugwu ugwu a ma ama ụwa.
Ọzọkwa, oke osimiri ya na osimiri anọ nwere mmetụta dị jụụ na mpaghara ahụ, ọbụlagodi mgbe azụmahịa azụmaahịa dị elu na-apụ apụ. Nallikari Holiday Village, nke dị na Bothnian Bay, bụ ebe ezumike osimiri na-eme kwa afọ nke nwere ọtụtụ obodo mara mma nke dị naanị otu okwute n'etiti Oulu. N'oge oyi, oké osimiri oyi kpọnwụrụ bụ ihe na-atọ ndị na-anụ ọkụkọ ice ụtọ.
Ọbịa nwere ike mfe ijikọta azụmahịa, izu ike na ezigbo nri na Nallikari. Alllọ oriri na ọ Nụ Nụ Nallikari na-enye efere ndị Scandinavia nke nwere ụdị French. N'oge ọkọchị, enwere ike ịhazi nnukwu ihe omume iji ogige ahụ dị ka ohere ọzọ - nnukwu ọgbakọ a na-eme na ebe a na-anabata ndị mmadụ 2,000. Obodo ahụ dị egwu na-akwado ihe karịrị narị asaa kwa afọ; ndia gunyere na World Air Guitar Championship, Polar agba agba, Ememe Irish nke Ouluna Azụ ememme egwu.
More ozi na Nleta Oulu